Ungabelana Kanjani negalari yeLucidPix - uLucidPix
Ubuwazi ukuthi ungathumela owakho amafreyimu we-3D nezithombe ze-3D kugalari yeLucidPix ukuze ubonwe ngamakhulu ezinkulungwane zabasebenzisi abakanye naye? Kulula, vele ulandele lezi zinyathelo ezimbalwa ezilula:
Dala uzimele wakho we-3D noma isithombe
Igalari yeLucidPix ingasetshenziswa ukukhombisa konke okudalwe yi-3D Photo kanye ne-3D Frame yendalo, noma ngabe ukwenzile eLucidPix noma ngokwakho. Awuqinisekile ukuthi usithatha kanjani isithombe esihle kakhulu sokuboniswa kwe-3D? Bheka okuthunyelwe kwethu kwebhulogi ukuthola izeluleko ezithile. Qiniseka ukuthi usindisa isithombe sakho ukuze usithumele kusinyathelo esilandelayo.
Ngikhombise Izindlela Zokwenza amavidiyo
Ukuze uthole ithuba lokuthi kudalwe i-3D yakho ku-LucidPix Gallery, thepha kusithonjana sokwabelana ngakwesokudla phezulu kwesikrini sasekhaya seLucidPix. Lokhu kuzokusa ekhasini elisha lapho uzokwazi ukulayisha khona ubuciko bakho kuLucidPix.
I-Protip: Ungabelana ngezithombe zama-3D namafreyimu adalwe ngaphakathi kweLucidPix noma i-3D Photos oyidalile ngesandla kwenye isoftware enjenge-Adobe Photoshop.
Ukwabelana ngokudalwa kweLucidPix
• Thepha isithonjana sokwabelana
• Thepha Ukungenisa kusuka ku-3D Album inkinobho
• Khetha isithombe ongathanda ukusaba, usinike igama, bese uthepha
• Qinisekisa ukuthi usukulungele ukwabelana ngokuthepha inkinobho
Ukwabelana Ngendalo Yakho
Wakhe okuthile kusuka ekuqaleni okufanele ukukuhlanganyela? Ayikho inkinga! Uma ungathanda ukwaba isithombe se-3D osenze ngaphandle kweLucidPix:
• Thepha isikwele esikhulu ngakwesokunxele kwesikrini ukukhetha isithombe sakho sombala
• Phinda inqubo yoxande ngakwesokunene kwesikrini, kepha kulokhu khetha imephu yokujula ehambisanayo.
• Uma usuyikhethile yonke imibala nemephu yokujula yemephu, igama lakho, bese uthinta u-Thumela kulandelwa ngu Qinisekisa ukuthola ithuba lokufaka phakathi kwegalari yeLucidPix
Ungabelana kanjani ngeLucidPix 3D Gallery neLucidPix 3D Photo
Ungabelana kanjani eLucidPix 3D Gallery ngesithombe esenziwe ngesandla se-3D
Ukuthola ubuciko bakho buvunyelwe igalari yeLucidPix
Akusikho konke ukuhanjiswa okuzokwamukelwa kugalari yeLucidPix. Ngethuba elihle lokuthi ubuciko bakho bukhethwe ukuthi bufakwe, qiniseka ukuthi isithombe sakho sikhanyiswe kahle, kugxilwe futhi ukuthi umphumela we-3D unezela ekujabuleni kwesithombe.
Ungakuthola Kanjani Ukubukwa Okuningi ku-Instagram Izindaba →← Umehluko phakathi kwesithombe esijwayelekile se-2D nesithombe se-3D